Covid-19 ကာလမှာစျေး၀ယ်ထွက်တဲ့အခါ လက်အိတ်ဝတ်သင့်သလား? - Your Fitster Health & Beauty (Myanmar)
နေ့တိုင်းအိမ်သားတွေအတွက် ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးဖို့ ယခု Covid-19 ကာလမှာ တစ်ပတ်တစ်ခါ..၂ပတ်တစ်ခါတော့ အိမ်ရှင်မတိုင်း စျေးဝယ်ထွက်ကြပါတယ်။ များသောအားဖြင့် Shopping Center မှာတွေ့မိတဲ့ အိမ်ရှင်မအများစုဟာMask ကတော့ လူတိုင်းလိုလိုတပ်ထားကြပါတယ်။ တချို့ဆို mask တပ်တာအပြင်လက်အိတ်တွေပါ ၀တ်လာတတ်တာ တွေ့ရပါတယ်။မေးစရာက လက်အိတ်က တကယ်ရော ရောဂါကိုကာကွယ်ပေးသလား ဆိုတာပါ။ တိုတိုတုတ်တုတ်ဖြေရရင် အဖြေက No ပါ။ ဘယ်အမျိုးစားလက်အိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်အိတ်၀တ်ခြင်းက ရောဂါပိုးကို မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
ပိုးရှိနေတဲ့မျက်နှာပြင်ကို (သို့) အရာတစ်ခုခုကို ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါ ဗိုင်းရပ်စ်က သင့်လက်အိတ်မှာကပ်နေမှာပါ။ လက်ချောင်းနဲ့ထိလို့ လက်ချောင်းမှာကပ်နေသလို တူတူပါပဲ။ ဒါကြောင့်လက်အိတ်ဟာ အလွှာတစ်ခုဖုံးအုပ်ထားသလိုကာကွယ်ပေးနိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်အိတ်နဲ့ ပါးစပ်ကိုထိမယ် (သို့) နှာခါင်းကိုထိမယ် ဆိုရင်ကူးစက်တာချင်းက အတူတူပဲဖြစ်မှာပါ။လက်အိတ်ချွတ်တဲ့အခါ သတိမမူမိရင် လက်နဲ့ မျက်နှာကိုတောင် လက်အိတ်ကတဆင့်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ စျေး၀ယ်စင်တာတွေမှာ လက်နဲ့ထိတွေ့ဖို့ စိုးရိမ်နေတဲ့ အရာတွေထက် တကယ်တမ်းက ကိုယ်နဲ့ စကားပြောလိုက်တဲ့သူ၊ နှာချေလိုက်တဲ့သူတွေက နီးနီးကပ်ကပ်အနီးအနားရှိနေတာက ပိုကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ စင်တာမှာ မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့က မသွားခင်မှာ၀ယ်မယ့်စာရင်းသေချာရေးပြီး မြန်မြန်၀ယ် မြန်မြန်ထွက် Mask တပ် ပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ၆ပေခွာပြီး စျေး၀ယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ကိုယ်၀ယ်ဖူးတဲ့ ၀ယ်နေကျနေရာကို သွားတာက ဘယ်နေရာမှဘာရှိတယ်ဆိုတာ သိပြီးသားဖြစ်လို့ လိုအပ်တာမြန်မြန်ကောက်ယူလို့ရသလို Store မှာ ပတ်ရှာနေရမယ့်အချိန်လည်း သက်သာစေပါတယ်)
၂။ လက်အိတ်၀တ်ခြင်းကြောင့် လက်ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ပြီးသားလား?
သင်လက်အိတ်၀တ်လိုက်လို့ လက်ဆေးစရာမလိုတာမဟုတ်သလို လက်ဆေးခြင်းအချိန်ကိုလဲ Save မဖြစ်ပါဘူး။ ဆပ်ပြာနဲ့လက်ဆေးတာကတော့ လက်အိတ်ဝတ်ဝတ်မဝတ်ဝတ် ဆေးနေရမှာပါပဲ။ ဆပ်ပြာနှင့်လက်ဆေးခြင်းကသာဗိုင်းရပ်စ်ကို ထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်တာပါ။ အကောင်းဆုံးက စင်တာထဲဝင်မယ်ဆို အဝင်ဝမှာ Hand Gel သုံးပြီး Shopping Cart လက်ကိုင်ကိုပိုးသတ်ဆေးဖြန်းပြီး၀င်တာက ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရောက်တဲ့အခါ အနည်းဆုံး စကန့် (၂၀)ခန့်လက်ဆေးပြီး hand phone နဲ့ ကိုယ်ပြန်သုံးမယ့်အိတ်တွေကိုပါ အရက်ပြန်နဲ့ ပွတ်တိုက်ဆေးသင့်ပါတယ်။
၃။ လက်အိတ်ဝတ်ခြင်းကပတ်၀န်းကျင်ကိုရော ကာကွယ်ပေးသလား?
စျေး၀ယ်စင်တာက ထွက်လာတဲ့အခါ သင့်လက်မသန့်ဘူးလို့ခံစားရသလို လက်အိတ်၀တ်ထားရင်လည်း လက်အိတ်က ညစ်ပတ်လာနိုင်ပါတယ်။ အခြားစျေးဝယ်သူတွေအတွက်တွေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်မဝယ်မယ့် အရာကို ကိုယ့်လက်နဲ့ မထိသင့်တာပါပဲ။ ကိုင်ကြည့်လိုက် ပြန်ထားလိုက်လုပ်တာထက် ကိုယ်၀ယ်မယ့်ဟာကို တစ်ချက်ကိုင် စျေးဝယ်ခြင်းထဲထည့် လုပ်သင့်ပါတယ်။
၄။ ဆေးရုံသုံး (medical gloves) တွေကိုဖြုန်းတီးမိနေသလား?
ကျန်းမာရေးသုံးလက်အိတ်တွေဟာ ဆေးရုံ ဆေးခန်းတွေမှာ ဆေး၀န်ထမ်းတွေ တကယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှသာ သုံးကြတဲ့ ပစ်စည်းဖြစ်ပါတယ်။သွေးထွက်နေတဲ့ လူနာကိုကိုင်တွယ်တဲ့အခါ၊ ဆီး ၀မ်းနှင့်ထိတွေ.တဲ့အခါကာကွယ်ဖို့သုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးလောကမှာသုံးတဲ့ ကျန်းမာရေးလက်အိတ်တွေဟာလုံလုံလောက်လောက်ပေါပေါများများ မရှိတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စျေး၀ယ်ထွက်တဲ့အခါ ဒီလက်အိတ်ကို တကယ်လိုအပ်သလား၊ တကယ်ကော ထိရောက်သလား တွေးပြီးမှ သုံးသင့်ကြောင်းအကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
(webmd-com မှ Artical အား Your Fitster Team မှ ဆီလျော်အောင်ဘာသာပြန်သည်)